# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished January 1, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်း, 2013 ဗေဒင်, Zodiac for 2013, သင်္ချာဗေဒ, ဗေဒင် 2013, ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဟောကိန်းများ | 152 Comments	# သြဂုတ်လ အတွက် နာမည်သင်္ချာ ဟောကိန်းများPublished August 21, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	လစဉ်ဟောကိန်းတွေကို ကျွန်တော် ပုံမှန်တွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်မတင်ဖြစ်ပါဘူး။
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged ဂဏန်းဗေဒင်, နာမည်သင်္ချာ, သင်္ချာဗေဒ, သြဂုတ်လ	# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများPublished August 8, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged Numerology Birth Date, Your Numbers, ဂဏန်းဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, သင့် မွေးဂဏန်း သင်္ချာ, သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ	၉ ဂဏန်း နှင့် နာမည်ကျော်ကြားသူများPublished February 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	၉ ဂဏန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံ အတော်များများမှာ အတော် ရေပန်းစားတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း” ဆိုတဲ့ စကားဟာ “မြန်မာ့ဂမ္ဘီရ လောက” မှာ အတော်ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း အဓိဌာန်” တို့၊ “၉ န၀င်း မိုးအလင်း” တို့၊ “၉ န၀င်းစီး ယတြာ“ တို့၊ “၉ န၀င်းသင်္ချိုင်း သံဒါး”တို့ “၉ န၀င်း ထွက်ရပ်လမ်း”၊ “၉ န၀င်း ဆေးတော်ကြီး” “၉ မြို့ရှင်၊ ရွာတော်ရှင်” . . “၉ တိုင်း ၉ ဌာန” “တြိစက္က ကိုးန၀င်းဇာတာ” တို့ဆိုတာ ပုတီးလိုင်း၊ ဗေဒင်လိုင်း၊ ဂမ္ဘီရလိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် နားမစိမ်းကြပါဘူး။
Posted in မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, Horary Astrology, hura veda, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |9Comments	# 2010 (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished December 31, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်း, burmese zodiac, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, myanmar zodiac, myanmar zodiacal horoscope, myanmar zodiacal signs, zodiac astrology, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၀ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ | 89 Comments	# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂)Published November 22, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged Myanmar Astrology, နက္ခတ်ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ | 26 Comments	# ဒီလို မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ဟောခဲ့ဘူးသည်Published October 12, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နဲ့ လူငယ်ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးမှု၊ မာန်မာနထောင်လွှားမှု၊ ယုံကြည်စိတ်လွန်ကဲမှုတွေ များပြီး မပြောသင့် ၊ မလုပ်သင့် တာတွေ လုပ်မိခဲ့တာကို နောင်တ, ရမိလို့ ရေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလို နိဒါန်းချီ နေရသလဲ ဆိုတော့ ဒီဆောင်းပါးကို အမှတ်တမဲ့ ဖတ်ကြည့်ရင် ဒီဆရာ ကြွားလုံးထုတ် ထားတာလို့ ထင်မိမှာ စိုးလို့ပါ။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်ဘ၀ နဲ့ လူကြီးဘ၀ စိတ်ဓာတ် ခံယူမှုခြင်း၊ အတွေး အခေါ်ခြင်း ကွာခြားလာတာကို ဖော်ပြချင်တဲ့ ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
Posted in ဟူးရားဗေဒင် | Tagged k.p hura, mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 17 Comments	# ဆရာတော်(၂)ပါး၏ ကံကြမ္မာဝဋ်ကြွေးPublished September 25, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီနှစ် (2009)ခုနှစ် ဇွန်လပိုင်း (4) ရက်နေ့တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း မုံရွာမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ “ဗောဓိတစ်ထောင်” ဘုရားမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရပ်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ ဓာတ်လှေကား မတော်တဆမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလွန်ထင်ရှား ကျော်ကြားလှတဲ့ ဆရာတော်(၂)ပါး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြတာကို အများပြည်သူတွေ ကြားသိလိုက်ကြမှာပါ။ အဲဒီ ဆရာတော် (၂)ပါး ကတော့ “ရွှေပါရမီတောရဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက” နဲ့ “အရှင်ရာဇိန္ဒ (ခ) ရဝေနွယ်(အင်းမ) တို့ဘဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကြားလိုက်ရချိန်မှာ စာရေးသူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ရပြီး အလွန်လဲ စိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဆရာတော်(၂)ပါး လုံးရဲ့ စာဖတ် ပရိတ်သတ် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆရာတော် (၂)ပါးလုံးကို ပရိယတ်၊ ပဋိပတ် အကျင့်စရဏ တွေကြောင့်ရော၊ စာပေ အရေးအသား ထူးချွန် ပြောင်မြောက် လှမှုတွေကြောင့်ရော အလွန်ကြည်ညိုသူ ဥပသကာ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းကို အသေးစိတ် သိရချိန်မှာတော့ အသက်အန္တရာယ် မရှိကြလို့ တော်တော် စိတ်အေးသွားပါတယ်။ “အရှင်ဆန္ဒာဓိက” က ခြေဖမိုး နဲ့ ဒူးခေါင်း ဂုံညင်းမှာ ဒဏ်ရာ ရသွားပြီး “အရှင်ရဝေနွယ်” ကတော့ ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ပြီး ခြေသလုံးရိုးတစ်ချောင်း ကျိုးသွားလို့ စတီးချောင်း ထည့်ထားရပါတယ်။ (၅)ရက်လောက်လည်း သတိလစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်မှာ တစ်ချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောကြတာတွေကို ကြားရပါတယ်။ “ဘယ်နှယ့်ဗျာ၊ လောကမှာ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်မျိုးစုံကို လုပ်နေတဲ့ သူတွေကြတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ ဒီလို သူတော်ကောင်းတွေကြမှ ဒီလို ဘေးဥပဒ်တွေနဲ့ ကြုံရပါလိမ့်၊ လောကကြီးမှာ လောကပါလတရား ဆိုတာ ရှိမှ ရှိပါသေးရဲ့လား” ဆိုတဲ့ အသံတွေကို တော်တော်ကြားလိုက် ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီလို ဂရုဏာ ဒေါသောနဲ့ ပြောတဲ့ သူတွေကို နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့သူတို့ဟာ “သံသရာ ၀ဋ်ကြွေး” ဆိုတာကို နားမလည်ကြလို့ ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged mahabote, Myanmar Astrology, ပက္ခတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |7Comments	# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်းPublished September 22, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုသိန်းဖေ။ ။ “ကြာပြီ ဆိုတော့ မေ့လောက်ပါပြီ၊ စိတ်မှာ ထင်ခဲ့တယ် . . . . အချစ်ဦးမို့ ယနေ့ထက် ထိအောင် ကိုယ်မမေ့ နိုင်သေးတယ် . . . ”
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged Myanmar Astrology, သင်္ချာဗေဒ | 56 Comments	# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်းPublished September 1, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ယနေ့သည် ကျွန်ုပ်နှင့် ကိုသိန်းဖေ တွေ့ဆုံနေကြနေ့ဖြစ်ပြီး ယနေ့ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်း အရာ မှာ (8)ဂဏန်း သမားများ အကြောင်း ဖြစ်လေသည်။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged (8)ဂဏန်း သမားများ, Myanmar Astrology, သင်္ချာဗေဒ | 54 Comments	# (7)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်းPublished August 23, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged (7)ဂဏန်း သမားများ, Myanmar Astrology, သင်္ချာဗေဒ | 18 Comments	# (6)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်းPublished August 2, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	အလှနတ်သမီး ဗီးနပ်စ် ရုပ်ထု
ကျွန်ုပ်။ ။ ကိုသိန်းဖေ ရေ။ အင်တာနက် လစဉ်ကြေးနောက်ကျလို့အဖြတ်ခံရတာရယ် , ကျွန်တော် ခရီးသွားမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်လိုက်တာ ရယ်ကြောင့် ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တနင်္ဂနွေစကားဝိုင်း လေးပျက်သွားတယ်ဗျာ။ ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ (6)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်းကို စ , လိုက်ကြရ အောင်လားဗျာ။
ကိုသိန်းဖေ။ ။ ဟုတ်ပါ့ဗျား။ ကျွန်တော်လည်း ဆရာက ခရီးသွားမယ်ဆိုတော့ တော်တော် ကသိကအောက် ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ အခု ဆရာဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ ကျွန်တော် ပြေးလာ ခဲ့ရတာ။ ကျွန်တော်ကလည်း (6)ဂဏန်းသမားဆိုတော့ ကျန်တဲ့ဂဏန်း တွေထက် ပိုသိချင်နေတာလေ။
ကျွန်ုပ်။ ။ အေးဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း တစ်ဖက်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် အချိန်ပေးရ၊ ဒီကြားထဲမှာ “ကွေးသောလက် မဆန့်ခင်၊ ဆန့်သောလက် မကွေးခင်” ဆိုတာလို အချိန်မရွေးကျရောက်လာနိုင်တဲ့ “သေခြင်းတရား” ကို နှလုံးသွင်းပြီး နေ့စဉ်အားထုတ်နေတဲ့ ၀ိပဿနာ အလုပ်ကလည်းရှိနေတော့ ဒီဘလော့လေး ရှင်သန်နေဖို့ တော်တော် အချိန်လုပြီး လုပ်နေရတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်မကွယ်လွန်မှီ အတွင်း ကိုယ်သိသမျှ တတ်သမျှ လေးတွေကို ချန်ထား ခဲ့ချင်လို့ပါ။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged (6)ဂဏန်း သမားများ, Myanmar Astrology, သင်္ချာဗေဒ | 19 Comments	# (5)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်းPublished July 12, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုတပါတ်တနင်္ဂနွေသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း အလှည့်ကျ လာသောနေ့ ဖြစ်သောကြောင့် ယနေ့တွင် (5)ဂဏန်းသမားများအကြောင်း ဆွေးနွေးကြရန် ကျွန်ုပ်နှင့် ကိုသိန်းဖေ တို့ စကားဆိုခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ စကားဝိုင်းကို အစပြုလိုက် ရပေတော့သည်။
ကျွန်ုပ်။ ။ ကဲ- ကိုသိန်းဖေရေ။ ဒီနေ့တော့ (5)ဂဏန်းသမားတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးကြမယ်မဟုတ်လားဗျာ။
ကိုသိန်းဖေ။ ။ ဟုတ်ပါ့ဗျား။ (5)ဂဏန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆရာ့အမြင်၊ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြောပြပါဦးဗျာ။
ကျွန်ုပ်။ ။ ကိုသိန်းဖေ ရေ။ (5)ဂဏန်းဟာ သင်္ချာဗေဒပညာမှာ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် စိုးမိုးတဲ့ဂဏန်းဗျ။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကို အင်္ဂလိပ်လို Mercury လို့ခေါ်တယ်။ ဂရိ ဒဏ္ဍာရီတွေမှာတော့ “ဟားမီးစ်” လို့ခေါ်တဲ့ ခြေထောက်မှာ အတောင်ပံပါတဲ့ ခြေမြန်တော် နတ်သားဟာ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ရဲ့ အမှတ်အသားပေါ့ဗျာ။ နောက်တစ်ခု က ပြဒါးကိုလည်း မာကျူရီလို့ဘဲခေါ်တယ်။ ပြဒါးဆိုတာ အဂ္ဂိရတ်သမား တွေအတွက်တော့ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ဒြပ်စင်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ။ ကြားဘူးမှာပေါ့ဗျာ။ ” သံ,သေ၊ တစ်ဆွေဝ၊ ပြဒါးသေ တစ်ပြည်ဝ” တဲ့။
ပြဒါးဆိုတဲ့ ဓာတ်ဟာ သေအောင်လုပ်ဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲလွန်းလို့ ပြဒါးကို သေအောင် ထိုးနိုင်ရင် “ရွှေဖြစ်ချင်သလားရွှေ၊ ငွေဖြစ်ချင်သလား ငွေ” ဆိုတာမျိုးလို ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အဂ္ဂိရတ်သမားတွေ ယုံကြည်ကြတယ်။ ယုံကြည်သလိုလည်း လုပ်နေကြပေမယ့် အောင်မြင်တယ် လို့တော့ မကြားဘူးသေးပါဘူး။ ပေါက္ကံရာမလို့ ခေါ်တဲ့ ပုဂံပြည်ကြီး ကောင်းစားစဉ်က “ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ” လို့ခေါ်တဲ့ ရှင်မထီးကြီးဟာ ပြဒါးကို သေအောင်ထိုးနိုင်လို့ ပေါက္ကံပြည်ကြီး ရွှေမိုးငွေမိုး ရွာခဲ့တယ် ဆိုတာလည်း ကြားဖူးမှာပေါ့။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged (5)ဂဏန်း သမားများ, Myanmar Astrology, သင်္ချာဗေဒ | 23 Comments	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,429)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,954)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,499)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,293)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,377)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,535)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,562)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,927)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,279)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,262)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,082)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,046)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,811)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,748)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,296)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,109)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,830)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,469)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,181)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,134)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,824)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,680)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,541)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,462)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,252)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,220)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,887)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,666)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,468)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,008)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !